गैरागाउँवासीलाई निद्रा न भोक ! – Dullu Khabar
गैरागाउँवासीलाई निद्रा न भोक !
१० भाद्र २०७७, बुधबार ०५:००
दैलेख । वारी–पारी अग्ला डाँडा, पहाडको खोंचमुनी भिरालो जमीनमा अवस्थित गैरागाउँ बस्तीका सबै घरहरू माटो र ढुंगाबाट बनेका अनि पत्थरले छाएका छन् । टाढैबाट हेर्दा सुन्दर र आकर्षक देखिने यो गाउँका बासिन्दा भने यतिबेला निकै चिन्तामा छन् ।
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–४ स्थित गैरागाउँवासीलाई केही दिन यतादेखि निद्रा र भोक हराएको छ । यो बस्तीमा भदौ २ गतेको अविरल वर्षाका कारण ठूलो बज्रपात आइलाग्यो । राती साढे ११ बजेको समयमा ठूलो वर्षासँगै खसेको पहिरोले यो सुन्दर गाउँको ७ ओटा घर माटोमा मिलाइदियो ।
पहिरोमा परी २ जना बालकले मृत्यु भयो । मृत्यु भएका १२ वर्षीय बालक जनक कठायतको स्थानीयवासीले शव निकाले भने उनीसँगै सुतेका ११ वर्षीय लोकेश कठायतको शव ३ दिनपछि भेटियो । जनक आप्mनै घरमा पुरिए भने लोकेश सुतेको घरबाट भागेर दौडिए । अर्कोतिरबाट पनि पहिरो आयो । दोस्रो घरको गोठमा लुके, क्षणभरमै गोठ पनि पहिरोले माटोमा मिलायो र उनी पनि त्यहीँ बिलाए ।
‘भीरमौरीको बाटो । हामी पनि उद्धारमा जाँदा दुबैतिरबाट पहिरो आयो । समयमै जान सकेनौं । त्यतिबेलासम्म दुबैजना बालक पहिरोमा बेपत्ता भइसकेका थिए’, ठाटीकाँध–४ का अध्यक्ष रमेशबहादुर सिजापतीले भने । पहिरोमा परी घाइते भएका ६ जनामध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भीर भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट १७ घण्टापछि उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगियो ।
गम्भीर घाइते भएका टिकाराम कठायत, शमशेर कठायत मृतक जनक कठायतका बुबा र दाइ हुन् । आमा धनसरी कठायत र दिदी बेल कठायत सोही पहिरोमा परी सामान्य घाइते भएका छन् । यस्तै गम्मे नेपाली पनि पहिरोमै घाइते भए ।
पहिरोले टिकाराम कठायतका २ ओटा घर बगाएको छ । ३ जना परिवार घाइते छन् भने १ जना बालकको मृत्यु भयो । बल नेपाली, गम्मे नेपाली, मनबहादुर विक, कर्ण कठायत, दानबहादुर कठायत, पैल कठायतको घर पहिरोले बगाएको वडा अध्यक्ष सिजापतीले अभियान दैनिकलाई जानकारी दिए ।
पहिरो टिकारामको घरभन्दा २०० मिटर माथिबाट खसेको थियो । अहिले त्यो पहिरोका कारण २७ ओटा घर जोखिममा परेका छन् । जसका कारण आजभोलि यहाँका स्थानीयलाई निद्रा र भोक लाग्न छोडेको छ ।
आकाशमा बादल मडारिनेबित्तिकै गैरागाउँबासी झस्किन्छन् । पीडित पैलबहादुर कठायत भन्छन, ‘खाना खान मन नै लाग्दैन । पानी परेर कतिखेर पहिरोमा परिने हो भन्ने त्रासले पिरोलिरहन्छ । दिन बित्दै जाँदा रात नपरिदियोस् जस्तो लाग्छ । बादल लाग्दा र रात छिपिँदै जाँदा जति सुत्न खोजे पनि निद्रा आउँदैन । पहिरोकै डर लागिरहन्छ । कसरी निदाउने त्रासमै रात बिताउन पर्ने बाध्यतामा हामी छौं ।’
पहिरोले घर बगाएर विस्थापित परिवार कोही खुल्लाचौरमा त्रिपालमुनी त कोही आफन्तको घरमा बसोबास गरिरहेका छन् । पहिरोले सबथोक बगाएपछि पीडित परिवारलाई छाक टार्ने चिन्ता पनि टड्कारो छ ।
एकातिर परिवारको सदस्य गुमाएको पीडा । अर्कोतिर बाँचेकालाई पनि कसरी पाल्ने हो भनेर चिन्ता लाग्न थालेको लोकेश कठायतका बाबु दानबहादुरले दुःखेसो पोखे । घाइते टिकारामका जेठा छोरा (मृत्यु भएका बालकका दाजु) भुपेन्द्र कठायले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् । पहिरो गएको दिन भुपेन्द्र काम विशेषले घरभन्दा बाहिर थिए ।
पीडित परिवारले नजिकैको बाहकोट पसलबाट केही दिनका लागि दालचामलको व्यवस्था गरिएको वडाअध्यक्ष रमेश सिजापतीले बताए । ‘त्यो ठाउँमा पुगेको कच्ची सडक पहिरो गएर ठाउँ–ठाउँमा बन्द छ । नजिकै रहेको बाहकोटमा खाद्यान्न छैन । वडा कार्यालयबाट गरिएको सहयोगले मात्र पुग्दैन्’, उनले भने ।
उनीहरूका लागि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न पहल भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले बताए । कसको के–कति क्षति भएको छ, त्यससम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए । विस्थापित परिवारहरूको राहतका लागि विभिन्न संघसंस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरिएको छ ।